I-Chale Bay Farm - I-Tennyson View - I-Airbnb
I-Chale Bay Farm - I-Tennyson View
Ikamelo elizimele eline-air-conditioned elinegumbi lokugezela eliseduze, lilungele uma ufuna ikamelo kuphela futhi udle ngaphandle noma ngokubhukha eceleni kwamafulethi ethu amakhulu ukuze uhlalise abangane & umndeni owengeziwe. Inefriji encane, itiye nekhofi, i-TV, i-Bluetooth ne-WiFi.
Inombhede ohamba phambili (noma amashidi amabili) onezinto zokulala zikakotini zaseGibhithe, usofa, isihlalo kanye nendawo eyanele yekhabethe/idrowa. Amafasitela ase-France abheke ku-patio yomuntu siqu enezihlalo kanye nolwandle olumangazayo kanye nezindawo zasemaphandleni ezibheke e-Tennyson Down kanye Nezinsiza.
Ikamelo lingaphakathi kwenkimbinkimbi yamafulethi amane futhi liqukethe umnyango walo wangaphambili wangasese, futhi lilungele abantu abafuna ikamelo elengeziwe uma beqashisa elinye lamafulethi aphelele okuziphekela, noma abantu abafisa ukudla ukudla ngaphandle.
Indlu yokugezela ingaphakathi futhi ihlanganisa ubhavu ogcwele oneshawa enamandla, isitimela esinamathawula afudumele kanye nomshini wokomisa izinwele.
Ikamelo line-49 " HD satellite/i-inthanethi exhunyiwe ye-TV enamakhulukhulu eziteshi ze-Freesat futhi usebenzisa izici ze-Smart TV ungasebenzisa futhi ama-catchup-services afana ne-iP iPlayer futhi usebenzise amasevisi okustrima ahlanganisa i-YouTube, i-Netflix, i-Amazon Video ne-Brit Kaen (i-akhawunti edingekayo). Isidlali se-Bluetooth naso sinikezwa futhi ama-DVD nama-disbon ayatholakala emtatsheni wezincwadi ohlala e-Gym. Kukhona ngisho ne-remote ewusizo kanye nesokhethi eyenza kube lula ukuxhuma amadivayisi akho ku-TV.
Ukuze sikuvuselele ngesikhathi ukuze ulusebenzise ngokugcwele usuku lwakho kukhona iwashi le-DAB/wagen/i-alamu.
Leli kamelo lihlanganisa izindawo zokwenza iziphuzo ezinetiye lamahhala, ikhofi namabhisikidi ekuqaleni kokuhlala kwakho. Isiqandisini sesitayela se-Minibar. Asinazo izindawo ezigcwele
zokuziphekela. Sikhokhisa inani lokuhlanza ukukhokhela izindleko zokuhlanza izingubo nezegumbi. Lokhu kusivumela ukuba sikhokhise imali ephansi yosuku ngalunye futhi sisanakekela ukuhlala okufushane.
I-HDTV engu-49" ene- I-Amazon Prime Video, Disney+, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Sinikeza izivakashi indawo yazo kodwa uma ufuna ukuthi "sawubona" lapho ufika sizojabula ukukubonisa igumbi mathupha.